श्रीमानले छोडेपछि रोडमा यस्तो अवस्थामा भेटिईन यी बृद्धा, बुढेसकालमा छोराछोरीले पनि हेरेनन भन्दै रोईन- (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > श्रीमानले छोडेपछि रोडमा यस्तो अवस्थामा भेटिईन यी बृद्धा, बुढेसकालमा छोराछोरीले पनि हेरेनन भन्दै रोईन- (भिडियो)
श्रीमानले छोडेपछि रोडमा यस्तो अवस्थामा भेटिईन यी बृद्धा, बुढेसकालमा छोराछोरीले पनि हेरेनन भन्दै रोईन- (भिडियो)
admin December 5, 2020 जीवनशैली, भिडियो	0
काठमाडौ । जब मानिसलाई पिडा पर्छ तब मात्र थाहा हुन्छ सुख, पीडा र रोदनको असली कुरा र यस्को दर्दनाक अवस्था पनि । हो आज हामी यस्तै आफनै श्रीमानबाट बुढेसकालमा पनि यसरी पिडित भएर सडक पेटीमा भौतारिदै हिडेकी एउटी बूढी आमाको बारेमा कुरा गर्दैछौ । यी आमाको घर गोर्खा हो नाम बिबा खनाल जो अहिले ५० बर्ष भन्दा बढी भईन तर यिनको पिडा भने उस्तै छ । सानैबाट पिडापिडैमा हुर्केकी यिनी पिडा लुकाउन रातभरि रुने गर्छिन ।
आफन्त र इष्टमित्रले पनि हेरेनन नत आफनै सनतानले । भन्छन नि बुढेसकालमा के के सहनपर्छ के के देख्नपर्छ त्यो साचो भएको छ यि आमाको जिन्दगीमा । पीडा भुलाउन बेला बेलामा गित गाएरै आफै भित्र रमाउने गर्छिन । गित लेख्छिन, आफैभित्र खुशी हुन्छिन तैपनि पिडाले कहिले साथ छोडदैन ।
यी आमाका छोरीहरु पनि धेरै छन, धेरैचोटि छोरीको घरमा गएर पनि बसिन तर सासु ससुराले के भन्लान ? र छिमेकीले के सोच्लान ? भनेर अहिले भागेर काठमाडौ आएकी छिन । रुदै हार गुहार गर्छिन मलाई सहयोग गर भन्छिन तर कसैले सुन्दैनन,
हेरौ यी सडकमा भौतारिएको आमाको दर्दनाक ब्यथा:
मिति २०७७ साल मंसिर २० गते शनिबार, हेर्नुहोस् तपाईको राशिफल अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ!
पानी ल्याउन आफ्नै बाबुको शिर काटेको नारायणहिटी
कोरोना त्रासमै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका छोराको बिहे: यसरी गरियो बिहे, खर्च चै कोरोना कोषमा!